အခြေချတဲ့ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိသည့်အခါ, သငျသညျဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကားကိုမောင်းဖို့, သင်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်ကားတစ်စီးအာမခံရှိရမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုရှာတှေ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. သင်တစ်ဦးတိုက်ခန်းငှားတဲ့အခါမှာ, သငျသညျစာရွက်တစ်ရွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလသည်သင်၏ငှားဆပ်ဖို့သဘောတူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစတိုးဆိုင်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်. တချို့ကစတိုးဆိုင်ကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးအချို့အသေးများမှာ. သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းအရာများစွာကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ရဲသင်လုံခြုံနေဖို့ကူညီပေးပါမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, သငျသညျနီးပါးအရာအားလုံးတို့အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသုံးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျဆကျသှယျဖို့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေရန်, လေ့လာရန်, နှင့်ချိန်းစေ။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင်တစ်ဦးအကြီးတန်းလူဝင်မှုသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များမှာ? သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာအကြီးအကဲတစ်ဦးရှိသည် Do? ကျကွီးရှယျအိုမြားအဘို့အအရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. အကြီးတန်းစင်တာကိုရှာပါနှင့်သင့်ရပ်ရွာထဲတွင်အဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်တခြားနည်းလမ်းတွေလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
America မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလအမေရိကတိုက်၌ငါ့ကအရမ်းပထမဦးဆုံးလအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. ငါပျောက်ခဲ့, ရှုပ်ထွေး, နှင့်ကြောက်တယ်. အန္န, မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒုက္ခသည်တစ်ဦး, အမေရိကရှိသူမ၏ပထမဦးဆုံးလအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိပါ: ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ဘယ်လိုသငျသညျရဲ afraif Are? သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိပါ! အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ်, သင်တစ်ဦးရဲအရာရှိစကားပြောသည့်အခါကဒီမှာသင်သိသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်အရာဖြစ်ကြ၏
မူလစာမျက်နှာ vs အိမ်: အိမ်တအိမ်နှင့်တစ်အိမ်မှာအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?မူလစာမျက်နှာ vs အိမ်: တစ်စုံတစ်ဦးကခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ငွေတွေအများကြီးလုပ်လိုလျှင်, ဒါကြောင့်အိမ်တစ်အိမ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါကြောင့်ခက်ခဲမယ့်. ဒါပေမယ့်အိမ်ပြန်မယ့်ပိုက်ဆံထက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။